Shabaabul Mujaahidiin oo hawada ka saaray Idacaadii Afka Saliibiga ku hadli jiray ee BBC-da FM-yada ee ka howl gala Wilaayaadka islaamiga ah. | Halganka Online
Shabaabul Mujaahidiin oo hawada ka saaray Idacaadii Afka Saliibiga ku hadli jiray ee BBC-da FM-yada ee ka howl gala Wilaayaadka islaamiga ah.
Posted on Abriil 9, 2010 by halganka
Wareegto Maantaka kasoo baxday Maktabka Iclaamka Shabaabul Mujaahidiin ayaa guud ahaan lagu Xayiray shaqooyinkii ay qaban jireen FM-yada ay leedahay Hey’adda warbaahinta Ingiriiska BBC-da ee gudaha dalka soomaaliya.
Wareegtadan ayaa sidoo kale lagu sheegay in shabaabul Mujaahidiin ay la wareegi doonaan qalabka yaala FM-yada ay bbc-du ku leedahay gudaha Wilaayaatka islaamiga ah ee soomaaliya,waxaana wareetadan ay soo baxday kadib markii Maktabka Iclaamka Shabaabul Mujaahidiin uu si qoto dheer ugu kuur galay howlaha ay qabato warbaahintaas.
Idaacadda bbc-da waa warbaahin laga leeyahay dalka ingiriiska islamrkaana ah Codka koowaad ee qaabilsan fulinta Ajandaha gumaysiga saliibiga ee ku aadan dunida Muslimka ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday Maktabka Iclaamka Shabaabul Mujaahidiin.
Maktabaka Iclaamka ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa sidoo kale ku eedeeyey Hey’adda bbc-da inay dagaal kula jirto ka hir gelinta shareecada islaamka ee dalka soomaaliya iyo in Maamulo islaami ah laga dhiso gudha dalka soomaaliya.
Ugu dambayn Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Maktabka Iclaamka Shabaabul Mujaahidiin waxaa lagu faray Idaacadaha qandaraaska war tabinta kula jira Hey’adaha bbc-da iyo Voa-da in maanta laga bilaabo ay soo afjaraan qandaraaska ay kula jirtaan Hey’adaha BBC-da iyo VOA-da.
Dhanka kale wararka ka imaanaya Xarumihii ay bbc-du ku lahayd Magaalooyinka koonfureed ee dalka soomaaliya ay sheegayaan in islamarkiiba la bilaabay howsha lagu fur furayo qalabka ay Hey’adda bbc-du ku leedahay Xarumaha wilaayaadka islaamiga ah.
« Ciidamada Wilaayada Islaamiga G/gaduud oo Khaarijiyay Taliyihii ugu sareeyay Qabuuriyiinta iyo deegaanka Mareer Guure oo saaka degan. Wilaayada Jubooyinka oo Mamnuucday in gudaha Magaalada Kismaayo lagu iibiyo Maandooriyaha qaadka. »
AHMED,OHIOs, on Abriil 10, 2010 at 4:55 g said:
Asc ikhwaani May Allah give the victory to te Mujaahideen every where in the world Allahuma Ameeeeeeeeen Ameeeeeeen Ameeeeeeeen.